Wakaalado Kuma Filan Inay U Sheegaan Rajooyinka Aad Ku Socoto | Martech Zone
Wakaalado Kuma Filan Inay U Sheegaan Rajada Inay Socdaan
Sabtida, Diisambar 3, 2016 Sabtida, Diisambar 3, 2016 Douglas Karr
Mid ka mid ah waxyaabihii aan la yaabay ee ku saabsanaa soo saarista hay'addeena 7 sano ka hor waxay ahayd in aan isla gartay in hay'adda hay'aduhu ay wax badan ka dhiseen cilaaqaadka marka loo eego qiimaha adeegyada. Xitaa waxaan usii gudbi lahaa illaa iyo intaan dhihi lahaa waxay sidoo kale ku tiirsan tahay faa'iidooyinka xiriirka sidoo kale.
Miyuu macmiilkaagu ku aaminay oo miyaad iyaga la shaqeynaysay sannado? Hagaag, taasi waxay u horseedi doontaa gudbin iyo xiriir caafimaad oo sii socda. Miyaad ku qubeysay macmiilkaaga waxyaabo la yaab leh, sida tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo tikidhada shirka weyn ee soo socda? Waad la yaabi lahayd imisa macmiil ayaa ku heli doona sidoo kale.
Ma siisay macmiilkaaga qiimaha? Waa wax laga xumaado in taasi runti aysan saameyn ku yeelan kuwa kale. Waxaan had iyo jeer ku faannay shaqadeenna iyada oo ku saleysan sida aan kor ugu qaadnay oo aan horay ugu dhaqaaqnay macaamiisheenna. Waan la yaabnay markaan ogaanay in qaarkood aysan sameynin.
Sanadihii la soo dhaafay, markii aan macaamiisha qaadaneyno, wax badan ayaan qabaneynaa dadaal badan si loo hubiyo inay macmiil fiican noo yihiin sida ay u tijaabinayaan inay u arkaan haddii aan nahay macmiilka ugu habboon iyaga. Mararka qaar rajaduhu waxay rabaan inay hore u socdaan oo gadaal ayaan u riixnay ama waan iska dhaqaaqnay. Mararka qaarkood meheradda aan durba la shaqeyneyno waxay bedeshaa hoggaanka oo gadaal ayaan u riixnay ama waan ka dhaqaaqnay.
Markii aan ka istaagnay hal macmiil oo weyn, agaasimahooda cusub ayaa ka digay, "Waa inaadan gubin buundooyinkaaga." Waxaan u sheegay inaan xaqiiqdii doonaynin inaan taas samaynno laakiin uu qalad weyn ku dhacayo isagoo ka tagaya istiraatiijiyaddii aan soo saarnay. Waxay si guul leh u kobcisay dalabka khadka tooska ah ee shirkadda dhowr jeer sannadihii la soo dhaafay. Wuu ku majaajilooday inuu si fiican u ogaa. Marka waxaan ugu jawaabay waan soo laaban doonnaa markuu ka tago shirkadda. Sannado kadib waxaanan ka baqayaa inaan dhow nahay - shirkaddu way lumisay dhammaan socodkii aan siinay… ka dibna qaar. Waxaa laga yaabaa inaan la gubay buundooyinkeyga isaga, laakiin waxaan aaminsanahay inaan mar dhow shirkadda caawin doono.
Dhawaanahan, waxaan leenahay goob tafaariiqda raaxada nagala soo xiriir si aan u caawino. Meheraddu waxay beddeleysay lahaanshaha milkiilaha firfircoon ee leh shabakad aan caadi ahayn ayaa ka iibinayay meheradda qaar ka mid ah milkiileyaasha da'da yar ee hibada leh. In kasta oo uu sii socday, wuxuu ka walwalsanaa dhaxalkiisa wuxuuna doonayay inuu hubiyo in milkiilayaasha cusub ay guuleystaan. Maaddaama ayan mar dambe isku hallayn karin uu shabakadda, wuu nala soo xiriiray si uu u arko haddii aan ku kobcin karno wacyiga iyo dalbashada khadka tooska ah.
Dabcan, waan awoodnay. Waxaan ku tilmaannay arrimo dhowr ah oo hooseeya oo leh joogitaankooda websaydhka iyo sidoo kale waxaan ka wada hadalnay isbeddellada dhowaanahan ku saabsan warshaddiisa. In kasta oo uu aamminsanaa baahida loo qabo in shirkaddiisu ay sii yaraato, waxaannu ka helnay koboc ballaadhan iyo ballaadhin xagga internetka ah. Meheraddiisa tafaariiqda ee maxalliga ahi waxay lahayd badeecad iyo miisaan ay qaran ahaan ku aado - weligiis kama shaqeyn kumbuyuutarradaas tan iyo markii uu ku tiirsanaan lahaa shabakadiisa.
Markii aan ku sii dhowaanay ka hadalka miisaaniyadda iyo soo jeedinta, wuxuu bilaabay inuu gadaal ka riixo in miisaaniyaddiisu ay yar tahay. Waxaan ka wada hadalnay shabakadiisa iyo sannadihii ay ku qaadatay in la dhiso. Waxaan ka wada hadalnay dalabka uu u baahan yahay si loo ilaaliyo loona kobciyo ganacsiga. Wuu dib u riixay inuu dareemay inay taasi noqon karto lacag lumis, kaliya bedelida goob uu horey u dhisay oo aan caawinin ganacsigiisa gabi ahaanba. Waxaan ku celcelinay isaga istaraatiijiyadihii aan geyn lahayn - inaysan ahayn kaliya goob, waxay ahayd sumadeyn, kor u qaadida wax soo saarka, nuxur ahaan, wacyigelin raadin, awoodaha e-commerce… isagu ma uusan kobcin.
Labada tusaale waa shirkado lahaa awood aan caadi aheyn. Midka koowaad, runti waxaan gacan ka geysanay inaan gaarno oo aan kobcino kartida waxayna keentay malaayiin doolar shirkadda hoose. Oo waxaan kuu xaqiijin karaa in dakhligeennu uu ahaa mid intaas ka yar. Midka labaad wuxuu awood u lahaa malaayiin doolar, laakiin milkiilaha si fudud uma uusan arkin iyadoo aan loo eegin sida aan isugu daynay inaan u sharaxno. Laga yaabee inaan si hagaagsan ula jaan qaadi karno dalabka waxtarka qaar… laakiin waxaan ka shakisanahay inay caawin lahayd. Waxaan wali ubaahanahay iibsashada macmiilka iyo maalgashi wax ku ool ah oo la sameeyay si irbadda loo dhaqaajiyo.
Sidaas ayaan ku soconnay. Markuu na weydiistey inaan soo noqono oo aan sii wada hadalno, waxaan u ogeysiinay inaan ku sii soconno. Waxaan leenahay rajo aan aqoonsanay fursadda iyo saameynta ay shaqadeennu ku yeelatay macaamiisha kale.
Miyuu dejin doonaa istiraatiijiyad digital ah? Waxay u badan tahay… inuu heli doono wakaalad si ay xoogaa shaqo ah ugu qabato isaga. Qofka xad-dhaafka ah, mashruuc ama olole bilaaba, ka dibna la taga xoogaa lacag ah oo macmiilku uusan wax fiican ka qaban. Waxaan jeclaan lahaa in wakaaladuhu aysan sidaa u gaajaysanayn oo inbadan ay u sheegi lahaayeen rajada socod ku soco. Sanado ka hor, weligey sidaas ma dhihi lahayn.
Sanado ka hor, weligey sidaas ma dhihi lahayn. Waxaan dhihi lahaa waa shaqadeena inaan barno rajadayada iyo macaamiishayada. Haddii aysan aqoonsan qiimaha iyo maalgashiga loo baahan yahay in la sameeyo, taasi annagaa iska leh. Laakiin mar dambe maahan… Haddii rajooyinka ama macaamiisha aysan arki karin in adduunku is beddelay, in tartamayaashooda internetka ay cunayaan qadadooda, iyo inay u baahan yihiin inay si dhab ah u galaan maalgashiga boqolkiiba ee dakhliga guud ee dib loogu celinayo dadaalladooda suuqgeynta, I ' m kaliya ma lumi doono waqtigeyga anigoo isku dayaya inaan sharaxaad ka bixiyo mar dambe.
Waxaan ka baxsaday toddobaad ama wixii ka horreeyay Suuqleyda ayaa qeyb ka ahaa dhibaatada, inta badan dejinaya filashooyin aad u baaxad weyn oo qiimo jaban ku fadhiya. Natiijo ahaan, macmiilku waligiis kuma guuleysto oo, maadaama kharashka adeegyadii ay ku bixiyeen uusan shaqeyn, waxay ka labalabeenayaan inay maalgashadaan xitaa inbadan. Haddii qof kastaa ka hadlayo sida ay sheydaan u fududahay (markay ahayn), waxaan sidoo kale leenahay dhibaato dhinaca warshadaha ah.
Maxay kula tahay Miyaan ku degdegay jawaabtayda? Waxaa laga yaabaa inaan inbadan sidan sameenayay oo aan unoqonayo qof caajis ah.
Tags: hay'addamaalgashiga wakaaladaqiimahaceyrinta macaamiishatoogashada rajadakharashka wakaalada suuq geyntaistaraatijiyad marketingku soo noqo maalgashigaROIqiimaha
Iswaafajinta Iibka iyo Suuqgeynta: Saadaalinta ugu Saraysa ee Mustaqbalka